Qalalaasaha Mexico: Dhacdo naxdin leh oo ku saabsan nin dhintay oo tacsidiisa dad badan lagu laayay – Bulsho News
Qalalaasaha Mexico: Dhacdo naxdin leh oo ku saabsan nin dhintay...
Qalalaasaha Mexico: Dhacdo naxdin leh oo ku saabsan nin dhintay oo tacsidiisa dad badan lagu laayay
Isku darka sagaal qof ayaa lagu dilay labo weerar oo lala beegsaday tacsida
Koox hubeysan oo ku sugan dalka Mexico ayaa dishay sagaal ruux oo u baroor diiqayay nin isbuucii lasoo dhaafay ku dhintay xabsi, sida ay saraakiisha booliska sheegeen.
Sagaalka ruux ayaa lagu dilay labo weerar oo kala duwan oo ka dhacay magaalada Ciudad Juárez ee ku taalla waqooyiga dalkaas.
Dableyda weerarka fulisay ayaa marka hore bartilmaameedsatay guri ay qaar ka mid ah saaxiibbada iyo xubnaha qoyska uu ninka dhintay kasoo jeedo tacsi ku sameynayeen. Goobtaas ayaa lagu dilay saddex ruux oo isugu jiray labo dumar ah iyo hal nin.
Saacado kaddib, guri kale oo lagu sameynayay munaasabadda aaska ee isla ninka xabsiga ku dhintay ayaa la weeraray, waxaana lagu dilay lix qof oo kale.
Dad goob joogeyaal ah ayaa sheegay in kooxda hubeysan ay weerareen guriga xilli uu wadaag ka socday kaniisadda hoggaaminayay munaasabadda aaska. Waxay sheegeen in goobtii ay isu baddashay meel argagax leh kaddib markii ay burcadda rasaas fureen.
Dadka halkaas lagu dilay waxaa ka mid ahaa wiil 12 jir ah iyo aabihiis.
Dambi baareyaasha booliska ayaa warbaahinta maxalliga ah u sheegay in caddeymo xooggan loo hayo in hal koox ay fulisay labada weerarba.
Saraakiishu wali ma aysan shaacinin magaca ninka maxbuuska ahaa ee tacsidiisa la weeraray – balse xafiiska dacwad oogeyaasha ayaa sheegay in isaga qudhiisa la dilay Arbacadii, xilli uu ku jiray xabsiga magaalada Chihuahua.
Meydkiisa ayaa la geeyay magaalada Ciudad Juárez, si loogu aaso.
Ciudad Juárez, waxa ay ku taallaa xadka uu wadanka Mexico la leeyahay Mareykanka, waana mid ka mid ah magaalooyinka dalka Mexico ee ay ka dhacaan dilalka ugu badan.
Sanadkii 2021-kii, celcelis ahaan 4 qof ayaa maalin kasta lagu dilay magaaladaas, sida laga soo xigtay xogta ay aruuriyeen howl wadeennada xafiiska dacwad oogeyaasha ee maamulka gobolka.
Inta badan dilalka ayaa lala xiriiriyay arrimo salka ku haya cadaawad u dhaxeysa kooxaha daroogada ka ganacsada ee maxalliga ah, sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud ee gobolkaas.